Ihe niile ịchọrọ ịma banyere midwife toad (Alytes obstetricans)
Inicio >> Nature >> Midwife toad (Alytes ndị na-amụ nwa)
Igodo Amphibian nke ogige ndị dị na SpainDownload
Ma nke a bụ ụfọdụ ederede nke ihe m na-achọta banyere midwife toad.
Ọ bụ obere toad, ihe na-erughị 5 cm. Na a ndu afọ 5 nke pere ezigbo mpe nke toads (Bufo bufo) nwere ike ịdị ndụ ruo afọ iri atọ.
Anya nke ihu ya, nke nwere iris ọlaedo na nwa akwụkwọ kwụ ọtọ. Ọdịdị nke chubby, ọka grainy na waatị.
Ọ bụghị mpaghara, ụmụ nwoke nwere ike ịkekọrịta ebe obibi na nkume, akwara, wdg.. Ha na-asọrịta mpi n’etiti ha.
Na foto a anyị nwere ike ịghọta nke ọma nkuchi anya nke atọ ma ọ bụ akpụkpọ anụ.
Methodzọ mbụ bụ igodo nke anyị hapụrụ n’elu.
Zọ ọzọ e si amata ha bụ ịbụ abụ. Ọ dị oke iche, a na-apụghị ịkọwapụta ya, dị ka obere nkịtị obere ụda nke ụmụ nwoke na-efe, ọ dị ka obere ikwiikwii. Ruo ugbu a, agbanyeghị na m na-ege ya ntị ọtụtụ abalị, ma amaghị m anụmanụ ọ bụ. Ejisiri m ike idekọ ya. I nwere ike ige ya ebe a.
Ebe obibi na mpaghara nkesa
Anyị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ebe obibi dị iche iche, site na mpaghara ugwu, oke ọhịa na ikpere mmiri ruo n'obodo mepere emepe.
N'ime mba dị iche iche (Switzerland, Belgium, Germany, United Kingdom, Luxembourg, France na mpaghara Iberia)
Gịnị ka ha na-eri? Nri
Dị ka ụdị anuran ndị ọzọ Ha na-eri nri ududo, ogbu na nkwonkwo na obere ụmụ ahụhụ, ikpuru, larvae, enwe, ala ụwa, nla., Wdg
Ha abụghị anu ulo. Ma mgbe ụfọdụ, anyị na-azọpụta tadpoles si ọdọ mmiri ndị na-achọ nkụ. Ọ na-amasị m na ụmụ agbọghọ na-elekọta ha ma na-ahụ mgbanwe ndị ahụ.
Tadpoles ma ọ bụ larvae na-eri ihe ọkụkụ na anụ ahụ ha hụrụ na mmiri. Ọ bụrụ na ị ga-eri nri ha nwa oge ị nwere ike iji nri azụ mee ya.
Mgbe mmiri ozuzo mbụ nke Septemba na-abịa amplexus (nke bụ usoro ịlụ di na nwunye nke anuran amphibians)A na-emepụta ya na ala ma bụrụ ihe na-adịghị mma, na-ekwu na ọ bụ ụmụ nwoke na-ebu àkwá ahụ. Nwoke na-akpali nwanyi ịhapụ akwa akwa ya nke nwoke na-agwakọta na nko ya na ụkwụ aka ya ebe ọ ga-eburu ha ruo ihe dị ka ọnwa 1.
Enweghi m ike ịse ya ma, enwere m olile anya na m ga - enweta ezigbo foto nke amplexus n’isi nso.
Tydị ma ọ bụ ụdị nke midwife toads
Onwere umu anumanu 5 nke midwife toads:
Midwife toadAlytes ndị na-amụ nwa)
Midwife Iberian (Alytes cisternasii)
Nwa nwanyị Balearic ma ọ bụ tore ferreret (Alytes muletensis)
Midwife toad na Maghreb (Alytes maurus)
Enwere ike ịchọta 4 mbụ na Spain na Valencia, naanị ụmụ nwanyị na-eji midwife na-ebi ndụ. Yabụ enweghị ọgba aghara dị n'etiti ụdị mgbe anyị hụrụ otu.
Na n'oge oyi?
Anọ m na-echekarị ihe frogs na toads na-eme n'oge oyi.
Ọfọn, toads na anurans bruman. Brumation bụ ụdị nke ezumike nke amphibians na ihe na-akpụ akpụ. Ha hapụrụ ọnọdụ ike gwụrụ n’okpuru mmiri, agbanyeghị na ha ga na-eri nri ma na-a drinkingụ site n’oge ruo n’oge. M na-ahapụ nkọwa ndị ọzọ nke ezumike na brumation ke ibuotikọ emi.
1 Ihe omimi
2 Otu esi amata ya
3 Ebe obibi na mpaghara nkesa
4 Gịnị ka ha na-eri? Nri
5 Na amplexus
6 Tydị ma ọ bụ ụdị nke midwife toads
7 Na n'oge oyi?
8 Isi mmalite na amaokwu